Media Mission Nepal अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा नेता न्यौपानेको १० बुँदे फरक मत (पूर्णपाठ सहित) - Media Mission Nepal
अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा नेता न्यौपानेको १० बुँदे फरक मत (पूर्णपाठ सहित)
Published On : 30 December, 2021 3:40 pm
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता लेखनाथ न्यौपाने
काठमाडौं, १५ पुस : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन (११–१५ पुस २०७८) मा नेता लेखनाथ न्यौपानेले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजीतिक प्रस्तावमा १० बुँदे फरक मत राख्नु भएको छ । दाहालको प्रस्ताव माथी भएको छलफलमा नेता न्यौपानेले फरक मत राख्नु भएको हो ।
न्यौपानेले दाहाल माथी आत्म केन्द्रित र व्यक्तिवादी भएको, माओवादी ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसमार्फत् अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भिर आरोप लगाउनु भएको छ ।
यस्तो छ न्यौपानेको फरक मतको पूर्णपाठ
८. दलाल पुँजीवाद विरुद्ध लड्ने पार्टीले सबभन्दा पहिला त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त संगठन, नेता–कार्यकर्ता निर्माण गर्नैपर्छ । पसिना बगााएर वा उत्पादनसँग जोडिएका श्रमशील नेता–कार्यकर्ता समाजवादका खास आधार हुन । श्रम नगर्ने वा उत्पादनसँग नजोडिएका नेता–कार्यकर्ताको सघनता जब पार्टीमा देखापर्दछ तब त्यहाँ दलाल पँुजीले हैकम चलाउँछ । विना पसिना, उत्पादनसँगको विना सहकार्य दैनिक लाखौं गरिने हाम्रा नेता–कार्यकताहरुको खर्चको स्रोत के हो ? हामीमाथि विरोधीले आक्रमण गर्ने हतियार यही हो । यसकारण दलाल पँजीसँगको हाम्रो हितैषी सम्बन्धलाई व्यवहारिक अन्त्यको घोषणा, उद्योग/व्यापारबाट सम्पत्ति कमाएको तप्कालाई पार्टी समर्थक समूहमा झार्ने कार्यक्रम र विचौलीया धन्दाबाट सम्पत्तिवाल बनेको वर्गलाई पार्टीबाट निकाल्ने दृढताले मात्र हामी मार्क्सवादी बन्न सक्छौं । आधारभूत वर्ग धरातलमा हाम्रो आन्दोलनले खुट्टा टेक्छ । यसरी मात्र दलाल पँजीवादका विरुद्ध लड्ने कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उभिने नैतिकता राख्दछौं ।